Ruvara Kuchinja Garnet - Kusanganiswa kwepessartite uye pyrope garnet - video
Ruvara Change Garnet
A mix of spessartite uye pyrope. Iri dombo rinoratidza kuchinja kwemavara kubva ku-brownish masikati uye rose rose rinopenya mumoto. Izvozvo zvinoshamisa zvakanyanya uye zvinoshamisa, zvinopfuura izvo zvealexandrite inodhura.
Nhengo isina kuwanikwa uye inokosha yegarnet boka rematombo. Inonyanya kudiwa nokuda kwekukwanisa kwayo kusiyanisa muto. Izvo zvinoenderana nerudzi rwechiedza chechiedza. Iko kukwanisa kuchinja ruvara kazhinji kunokanganisa kukanganisa kwe pleechroism. Iko kukwanisa kuratidza mavara akasiyana-siyana zvichienderana nekutarisa kwekona. Izvo zvinoshamisa zvekushanduka kwemavara hazvisi zvinoenderana nekona yekuona. Inowanzosanganiswa-kusanganiswa kwepessartite uye pyrope uye mumatambudziko mazhinji, inogonawo kuva nematauro e grossularite kana almandine garnet.
Icho chikwata chemaminerari etilicate. Tinoishandisa kubva muBronze Age sematombo uye mabrasives.
Mhando dzose dzejarnet dzine zvinhu zvakafanana uye maitiro echikristini, asi zvakasiyana mumakemikari. Zvisikwa zvakasiyana-siyana zvinonzi pyrope, uyewo almandine, spessartine, grossular (zvakasiyana-siyana zvinonzi hessonite kana sinamoni-dombo uye savorite), ivarovite uye andradite. Matombo anoita maviri akaoma sarudzo series: pyrope-almandine-spessartine uyewo ivarovite-grossular-andradite.
Kubwinya kwemuvara-ruvara kunogona kunge kwakasimba, nokuti Inowanzopfuura iyo yealexandrite yakaisvonaka. Mazhinji ematombo aya acharatidza ruvara rwebhuruu-ruvara rwebhuruu kana ruvara kana ruchionekwa pasi pezuva masikati, asi kana rakataridzirwa pasi pechiedza chekudzivirira, rinenge rakaita sedzakasvibirika ku pink muvara. Kunewo zvimwe zvakasiyana-siyana zveimwe ruvara rwekuchinja pamwe chete. Kuti tinyatsonzwisisa huwandu hwakazara hwemavara garnet, micheka inofanira kuonekwa pasi pemhando dzakasiyana-siyana dzekuvhenekera, kusanganisira mangwanani-ngwanani masikati, masikati masikati, chiedza che-fluorescent uye chiedza chekudzivirira kana kenduru.
Kufanana nematombo anokosha ejarnet, kuchinja kwemavara hakuzivikanwi kuti kunobatwa kana kuwedzerwa nenzira ipi zvayo.
Chimiro Formula: [Mg3 + Mn3] AL2 (SIO4) - Manganese aluminium silicate
Dambudziko: 7 ku7.5
Unyanzvi: 3.65 ku4.20
Kusasununguka: Kuisa pachena, kushanduka, kutora
Colour Change Garnet, kubva kuTanzania
tenga chimiro chemavara chechigarire changamire mudura redu
Ruvara kuchinja sphene
Giant matombo anokosha
Tags Garnet, Giant matombo anokosha, safaya
Murafa Shandura Chrome Tourmaline